Bangladesh, Myanmar and Rakhine have same character and same ugly response when face the same incitation ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရခိုင် မြန်မာ အကျင့်စရိုက်တွေလာတူနေတာပေါ့ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeBangladesh, Myanmar and Rakhine have same character and same ugly response when face the same incitation ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရခိုင် မြန်မာ အကျင့်စရိုက်တွေလာတူနေတာပေါ့
Bangladesh, Myanmar and Rakhine have same character and same ugly response when face the same incitation ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရခိုင် မြန်မာ အကျင့်စရိုက်တွေလာတူနေတာပေါ့
If Bamas and Rakhines think Thida Htwe and Thaw Bita’s death are valid reason to Mass Murder Rohingyas and Myanmar Muslims…SHUT UP! Same thing is happening there!
You all Bamas and Rakhines in Thai and UK are lucky that those2countries never revenge on all of you afteraBritish couple was killed in Turtle island.
အစားအသောက် အနေအထိုင်လဲ သိပ်မကွာကြဘူး……..
ဒီတော့….အကျင့်စရိုက်တွေလဲ…လာတူနေတာပေါ့……
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကို အုပ်ချု ပ်တဲ့ အစိုးရက….
ဘယ်အချိန်…ဘယ်အခါကမှ….မုဒိန်းအကျင့်မခံရတဲ့…မသီတာထွေး ကို
အကြိမ်ကြိမ်….မုဒိန်းအကျင့်ခံရပါတယ်လုပ်ပြီး…ပြသနာ ဖန်တီးလိုက်ကြ
မိတ္ထီလာမှာလဲ ကြည့်ဦး…..ဘယ်အချိ န်အခါကမှ ..မသေခဲ့တဲ့…ဘုန်းကြီး
သောဘိတ…ဆိုတဲ့ …ကိုယ်ပျောက်တစ္ဆေ ကို အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ သေခိုင်း
ဘုန်းကြီး သတ်လို့ပါဆိုပြီး….တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချု ပ်တို့…ပြန်ကြားရေး
ဝန်ကြီးတို့ကအစ….မြို့ဖျက် ပြည်ဖျက်….စကားတွေပြော….မျိုးညစ်တွေ
ကို မြှောက်လိုက်တာ…….တတိုင်းတပြည်လုံး…..လူမျိုးရေးဘာသာရေး
အမုန်းတရားတွေ ပြန့်ပြီး…လူနဲစုတွေ ကို ဒုက္ခ ပေးနေလိုက်တာ…အခုအချိန်
အစိုးရတောင် နိုင်ငံတကာက…ရာဇဝတ်ခုံရုံး…အတင်ခံရတော့မယ်အချိန်အထိ….မရပ်ကြသေးဘူး……
မြန်မာဖက်မှာတော့…အစိုးရက တာဝန်ခံ ထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူး….
လျှော်ကြေးပေးဖို့ ဝေးစွ…..ပြသနာဖြစ်လို့….မကြို က်တဲ့ အကြောင်း…..
စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်း လာပြောတဲ့ အစိုးရ…ဖမ်းအလှူ ခံပြီး…ဘုန်း ပစ်လိုက် တာ ပိုသေးတယ်…..
ဘင်္ဂလားအစိုးရက လက်တွေ့ အရေးယူတယ်
လက်တွေ့ လျှော်ကြေးပေးတယ်…..
ASIA သတင်းက ရေးထားတာလေး…ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ………..
ဝန်ကြီးချုပ် ရှိတ်ခ်ဟာစီနာ၏ အာဏာရ အဝါမီအဖွဲ့ချုပ်၏ လူငယ်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သော ဂျူဘို အဖွဲ့ချုပ်၏ ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သူ နာရူး အစ္စလမ် နာရန်း သေဆုံး ပြီးနောက် ဒေါသထွက်နေသော မွတ်စလင်လူအုပ်က ၎င်းတို့၏ နေအိမ်များကို မီးရှို့သောကြောင့် ရမ်ဂမ်မက်တီခရိုင်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ ချက်မာ အသိုင်းအဝန်းမှာ ထွက်ပြေးကြရသည်။
← ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြသခွင့်တားဆီးခံရ
“ဘက်စုံကျွမ်းကျင်သူများ ပေါများသည့် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်” →